बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो तर ? – Etajakhabar
मान्छे बिरामी हुन्छ, बुढ्यौली लाग्छ र ऊ एक दिन मर्छ, तर किन ? यो विषयमा सिद्धार्थ गौतमले लामो अनुसन्धान गरे । घरबार छोडे, समाज त्यागे, शरीरको माया मारे । अनुभूतिको गहिराइमा पुगे । त्यसपछि उपरोक्त प्रश्नहरूको उत्तर निकाले । यस अर्थमा गौतम बुद्ध अनुसन्धानकर्ता पनि हुन् । कान्तिपुर साप्ताहिकले छापेको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र ०३, २०७४ समय: १०:०९:४५